२ पत्रुस ३:१-१८
३ हे प्रियहरू हो, मैले तिमीहरूलाई लेखिरहेको यो पत्र दोस्रो पत्र हो। मेरो पहिलो पत्रमा झैं यस पत्रमा पनि केही कुरा सम्झना गराएर म तिमीहरूमा स्पष्टसित सोच्ने क्षमता जगाउँदैछु, २ ताकि तिमीहरूले उहिले-उहिलेका पवित्र भविष्यवक्ताहरूले बताएका कुराहरू अनि हाम्रा प्रभु र उद्धारकले तिमीहरूका प्रेषितहरूमार्फत दिनुभएका आज्ञाहरू सम्झन सक। ३ तिमीहरूले सबैभन्दा पहिले यो कुरा बुझिराख, अन्तको दिनमा, आफ्ना कुइच्छाहरू पूरा गर्न गिल्ला गर्नेहरू गिल्ला गर्दै देखा पर्नेछन्‌ ४ र भन्नेछन्‌: “उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको उहाँको उपस्थिति खोइ? किनकि सृष्टिको सुरुवात्‌देखि सबै कुरा जसरी चल्दै आएको थियो, हाम्रा पुर्खाहरू मृत्युको चिर निद्रामा परेको दिनदेखि यता पनि त्यसरी नै चलिरहेको छ।” ५ यस कुरामा तिनीहरू जानीबुझीकन ध्यान दिंदैनन्‌, आकाश पहिल्यै थियो अनि परमेश्वरको वचनद्वारा जमिन पानीमाथि निस्क्यो र चारैतिर पानीले घेरिएर रह्यो। ६ अनि तीद्वारा नै त्यसबेलाको संसार जलप्रलय हुँदा डुबेर नाश भयो। ७ त्यही वचनद्वारा अहिलेको आकाश र पृथ्वीलाई आगोको निम्ति साँचिएको छ अनि भक्तिहीन मानिसहरूको न्याय र विनाश हुने दिनसम्मका लागि छुट्याएर राखिएको छ। ८ तर हे प्रियहरू हो, तिमीहरू यो एउटा कुरा नबिर्स, यहोवाको लागि एक दिनचाहिं एक हजार वर्ष र एक हजार वर्षचाहिं एक दिन हो। ९ केही मानिसहरूले सम्झेजस्तो यहोवा आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्ने सन्दर्भमा ढिला हुनुहुन्न तर उहाँ तिमीहरूप्रति धीरजी हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ कोही पनि नाश नहोस्, बरु सबैले पश्‍चाताप गरून्‌ भन्ने चाहनुहुन्छ। १० यहोवाको दिन चोर आएझैं आउनेछ। त्यस दिन आकाश ठूलो आवाजसहित बितेर जानेछ तर तत्त्वहरूचाहिं प्रचण्ड तापले गर्दा पग्लनेछन्‌ अनि पृथ्वी र त्यहाँ गरिएका कामहरू फेला पर्नेछन्‌। ११ यी सबै कुराहरू यसरी पग्लने भएकोले तिमीहरू कस्तो किसिमको मानिस हुनुपर्छ, सोच! तिमीहरू पवित्र आचरण भएका र परमेश्वरप्रतिको भक्ति प्रकट हुने कामहरू गर्ने मानिस हुनुपर्छ, १२ अनि तिमीहरूले यहोवाको दिनको उपस्थितिलाई सधैं सम्झँदै प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, जुन दिनले गर्दा आकाश आगलागी भएर पग्लनेछ अनि तत्त्वहरूचाहिं प्रचण्ड तापले गर्दा गल्नेछ। १३ तर हामी परमेश्वरको प्रतिज्ञाबमोजिम नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीको प्रतीक्षा गर्दैछौं, जसमा न्यायले बास गर्छ। १४ त्यसकारण, हे प्रियहरू हो, तिमीहरूले यी कुराहरूको प्रतीक्षा गरिरहेको हुनाले अन्तमा उहाँको नजरसामु तिमीहरू बेदाग र निष्खोट रहिरहेको अनि शान्ति कायम गरिरहेको पाइन भरमग्दुर कोसिस गर। १५ साथै, हाम्रा प्रभुको धीरजलाई उद्धार पाउने मौका ठान। हाम्रा प्रिय भाइ पावलले पनि आफूलाई दिइएको बुद्धिअनुसार तिमीहरूलाई यही कुरा लेखे। १६ आफ्ना अरू सबै पत्रहरूमा पनि तिनले यिनै कुराहरूको विषयमा बताएका छन्‌। तथापि, ती पत्रमा लेखिएका केही कुराहरू बुझ्न गाह्रा छन्‌, जसलाई अपठित र अस्थिर मानिसहरूले बङ्ग्याइरहेका छन्‌। तिनीहरू धर्मशास्त्रको अरू भागलाई पनि त्यसरी नै बङ्ग्याउँछन्‌ र आफ्नै विनाश निम्त्याउँछन्‌। १७ त्यसकारण, हे प्रियहरू हो, तिमीहरूलाई पहिल्यैदेखि यो कुराको ज्ञान भएकोले होसियार होओ, नत्र त व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने ती मानिसहरूको पछि-पछि लागेर तिमीहरू आफ्नो स्थिरताबाट पतित हुनेछौ। १८ बरु हाम्रा प्रभु अनि उद्धारक येशू ख्रीष्टको असीम अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाओ। अहिले अनि सदासर्वदा उहाँकै महिमा भइरहोस्।